TRINITERA: NY FANAHY MASINA
(Jereo eto ny vavaka)
Ny faniriana ny lanitra no vimiaina mamelona ny firosoam-panahy. Mahatsapa ny halemena ka miandrandra fanampiana, mila fanohanana mba hahatsapana fa tsy irery miatrika ny fiainana. Dia sady mahatsapa ny lafiny miankina amin'ny tena ihany koa, dia ny finiavana hanamasin-tena eo ampanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy adin'ny samy maka ho azy anefa izany fa fiombonam-po amam-panahy amin'ireo mino an'i Kristy, mahatsiaro hatrany fa eo afovoan'izay mivory amin'ny anarany i Kristy.
Ny fahatsapana fa voaavotra dia tonga loharanom-panirahana (misiona) vaovao, hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tany tontolo.